February 2018 – Kooxda.com
Daawo: Qaabkii Waalida Ahayd Ee Ay Man City Ugu Dabaal Degtay Koobka Carabao Cup-ka
Kooxda Man City ayaa kor u qaaday koobkeedii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka kadib markii ay si xarago leh uga qaaday kooxda Arsenal. Goolal ay dhaliyeen xiddigaha Sergio Aguero,Kompany iyo David Silva ayaa City ka caawisay in ay kor u…
February 26, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Tababare Pep Guardiola Oo Jawaab Cajiib Ah Ka Bixiyay Sababtii Uu Xiddigaha Ugula Biiri Waayay Gudoomista Koobka Carabao Cup-ka
Tababaraha Pep Guardiola ayaa doorbiday inuu sii joogo garoonka Wembley markii ciyaartoydiisu kor u fuuleen taarabuunka si ay u goomaan koobkii ay ku guulaysteen. Sida caadada ah tababarayaasha ayaa xiddigaha kula biiray si ay ula gudoomaan koobka iyo biladaha la…
Waxa aad mar walba ka sugi kartaa Xiddigaha Man United ee Jesse Lingard Iyo Paul Pogba Marka ay noqoto dabaal deg cusub oo xiiso leh. Laakiin dadkii daawanayay dabaal degii labada xiddig ee kulankii Chelsea ayaa laga yaabaa in ay…
Sawirro-Dhammaan 12-ka Garoon ee Martigelinaya Koobka Adduunka ee 2018, Qaramada Ku Ciyaaraya iyo Muggooda.
Wadanka Ruushka ayaa waxa uu martigelin doonaa dhacdada ugu weyn adduunka ee koobka adduunka oo afartii sanoba hal mar la qabto, waxaana lagu ciyaari doonaa 12 garoon oo kuyaal wadankaasi. Share on Facebook
February 25, 2018 · by	Abdi Hakim Omar Aden · 0
Gary Neville Oo Weerar Adag Ku Qaaday Xiddigaha Arsenal Kadib Markii Laga Qaaday Carabao Cup-ka
Gary Neville ayaa sharaf la,aan ku tilmaamay xiddigaha kooxaha Arsenal kadib markii guul 3/0 ay Man City ugaga qaaday Koobka Carabao cup-ka kulan ka dhacay garoonka Wembalye. Halyeeyga Man United ayaa joogay Xafiiska Sky Sport isaga oo ka sheekanayay kulanka…
Maxay Tahay Sababta Ay Taageerayaasha Kooxda Man City U Soo Xirteen Calaamada Jaalaha Ah Intii Lagu Jiray Kulankii Wembley Ka Dhacay?
Taageerayaasha kooxda Man City ayaa soo xirtay xalaamada jaalaha ee uu tababarohooda Pep Guardiola xirto kulankii Finalka ahaa ee ay kooxdoodu ugu guulaystay koobka Carabao cup-ka kana dhacay Wembely. Qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha City ayaa calaamada xirnaa…
Dib U Eegid: Arsenal Oo Khabiir Ku Ah Fashilka Finalka Carabao Cup-ka, Imisa Final Ayaa Laga Qaaday
Kooxda Arsenal ayaa laga qaaday koobka Carabao cup-ka iyada oo guuldaro weyn oo 3/0 ah kala kulantay kooxda Man city kulan ka dhacay garoonka Wembley. Man City ayaa si cajiib ah ku bilaabatay ciyaarta waxana ay dhaliyeen saddex gool oo…
Dib U Eegid: Goorma Ayaa Arsenal Ugu Dambeysay In Sedex Gool Looga Dhaliyo Garoonka Wembley ?,
Kooxda Arsenal ayaa guuldaro fool xun la kulantay Finalka Carabao cup-ka kulan ka dhacay Garoonka Wembely Iyaga oo la kulmay guuldaro 3/0 ah oo ay kala kulantay kooxda Man City. Goolal ay dhaliyeen Sergio Aguero,Vincent Kompany iyo David Silva ayaa…
Man City Oo Ku Guuleystay EFL Cup Markii 5-aad Taariikhooda, Arsenal Ayaa Sedexleey Uga Saareen Qalcadda Wembley
Man City ayaa nasiinada ugu dirtay kooxda Arsenal hal gool oo nadiif ah iyadoo ay ay wada ciyaarayeen labada koox finalka koobka League Cup-ka ka dib gool uu dhaliyay Aguero kaasi oo ahaa laad toos oo ka yimid goolhayaha City…
February 25, 2018 · by	Osman Hassan Ali · 0
Daawo: Goolkii Waalida Ahaa Ee Uu Sergio Aguero Ka Dhaliyay Arsenal, Cajiib Ayuu Ahaa
Weeraryahanka kooxda Man city ee Sergio Aguero ayaa Arsenal ka dhaliyay gool indha qabatin leh kulanka ay Gunners la ciyaarayaan Finalka Carabao cup-ka. Aguero ayaa kubad dheer ka helay goolhayaha Man City ee Bravo kaas oo si cajiib ah u…
Rasmi: Kulankii U Dhexeeyay Kooxaha Juventus & Atalanta Oo Si Rasmi Ah Loo Baajiyay, Maxa Sabab U Ah
Kulankii u dhexeeyay kooxaha Juventus iyo Atalanta kana dhici lahaa garoonka kooxda Juventus ayaa si Rasmi ah loo baajiyay kadib baraf si weyn ugu soo daatay garoonka. Barafka ayaa magaalada Turin haystay saacado laakiin waxa uu si xoog ah u…
Dib U Eegid: Sergio Aguero Oo Laba Rikoor Kala Baxay Qaybtii Hore Ee Final-ka Carabao Cup-ka
Weeraryahanka kooxda Man City ee Sergio Aguero ayaa laba rikoor kala baxay qaybtii hore ee kulanka ay La ciyaarayaan kooxda Arsenal Finalka Carabao cup-ka ka dhacay Wembley. Sergio Aguere ayaa goolka 1-aad u dhaliyay kooxdiisa Man city daqiiqadii 18-aad isaga…
DEG-DEG: Arsenal Oo Dhaawaca Ku Wayday Daafaca Nacho Monreal Intii Lagu Jiray Kulanka Man City
Kooxda Arsenal ayaa la kulantay dhirbaaxo wakhti hore ah finalka ay la ciyaarayso kooxda Man City ee ka socda Garoonka Wembley ee Carabao cup-ka. Arsenal ayaa lagu qasbay in ay badal wakhti hore ah samayso kadib markii uu dhaawac soo…
Romelu Lukaku ayaa ugu dambayn gool ka dhaliyay koox ka mid ah kooxaha ugu waaweyn premier League laakiin sameeyay arin ka farxisay taageerayaasha kooxda chelsea. Lukaku ayaa dib ugu soo celiyay kooxda Man United ciyaarta kadib markii uu goolkii bar-barah…
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa ku dheereeya ciyaar maskaxeedka taasna maaha mid cusub oo uu sameeyay. Tababaraha Man United ayaa isticmaala qorshe uu kooxda ka soo hor jeeda xiddigaha,tababaraha ama shaqaalaha kooxda ula isticmaalo ciyaar maskaxeed si…
Romelu Lukaku & Jesse Lingard Oo Man United Ka Caawiyay In Ay Old Trafford Ku Garaacdo Chelsea
Kooxda Man United ayaa guul ka gaartay kooxda Chelsea kulan xiiso lahaa oo ka dhacay garoonka Old Trafford kana tirsanaa horyaalka premier League todobaadkiisii 28-aad. Kulanka ayaa ku bilowday si dagan oo baas-baas ah oo ay labada kooxoodba si dagan…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Arsenal Vs Man City: Guardiola Mise Wenger Tababarehee Kor U Qaadi Doona Carabao Cup-ka
Kooxaha Arsena iyo Man City ayaa goordhaw calafkooda ku kala qaadi doona finalka Carabao cup-ka kaas oo ka dhici doona garoonka Old Trafford. Guardiola iyo Wenger oo markii ugu horaysay doonaa ku guulaysiga koobkan ayaa ku soo galay shax adag…
Daawo: Qaabkii Cajiibka Ahayd Ee Ay Willian & Hazard U Dhiseen Goolkii Uu Willian Ka Dhaliyay United
Willian ayaa gool qurux badan oo si fiican looga soo shaqeeyay ka dhaliyay kooxda Man United kulan ay ku wada ciyaarayaan Old Trafford. Goolka ayaa ka dhashay rogaal celis cajiib ah oo uu soo shaqeeyay Willian isaga oo kubada ka…
Shkodran Mustafi Oo Sheegay Qorshaha Ay U Dagsadeen Si Ay U Joojiyaan Kevin De Bruyne
Daafacaca kooxda Arsenal ee Shkodran Mustafi ayaa shaaca ka qaaday qorshaha uu u dagsaday si uu u joojiyo xiddiga khadka dhexe ee Kooxda Man City ee Kevin De Bruyne kulanka Finalka Carabao cup-ka ku dhex mari doona Wembley. Shkodran Mustafi…
Luis Suarez Oo Sameeyay Isku Dayo La Yaab Leh Si Uu Kaarka Digniinta U Qaato Kulankii Xalay & Sababta Oo La Ogaaday
Weeraryahanka Luis Suarez ayaa kulankii ay guusha 6/1 ah ka gaareen wakhtigii ugu dambeeyay dhacdooyin uu isugu dayay in uu kaar digniin ah ku qaato. Si kasta ha ahaatee Suarez ayaa ku fashilmay in uu helo wixii uu doonayay iyada…
Shaxda Rasmiga Ah Ee Man United Vs Chelsea: Pogba Oo Ku Bilowday Shaxda United & Morata Oo Dib U Helay Booskiisii
Garoonka Old Trafford ayay ka dhici doontaa ciyaar xiiso leh oo dhex mari doonta kooxaha Man United iyo chelsea kulan ka tirsan horyaalka premier league toodbaadkiisii 28-aad. Jose Mourinho ayaa go,aansday in uu khadka dhexe ku bilaabo kooxdiisa isaga oo…
Tababaraha Kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa soo saaray liiska xiddigaha uu kaga hor tagi doono kooxda Arsenal kulan ka tirsan finalka Carabao-ka ka dhici doona garoonka Wembley. Man city ayuu war xun u soo baxay iyada oo liiska…
Xiddiga kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa in uu maamulka kooxdiisa u sheegay in uu doonayo in uu koox premier League ah amaah ugu biiro sida ay sheegayaan wararku. Ousmane Dembele oo ah xiddiga 2-aad ee ugu…
Mohamed Salah Oo Ay 7 Gool Ka Xigaan In Uu Rikoor Kale Oo Taariikhi Ah U Dhigo Premier League
Xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed salah ayaa dhaliyay gool kulankii ay kooxdiisa Liverpool 4/1 kaga badisay kooxda West Ham kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League kulan ka dhacay Anfield. Salah ayaa haatan la goolal ah xiddiga Kooxda Tottenham ee Harry…
Taageerayaasha Kooxda Liverpool Oo Maanta Doonaya In Ay Chelsea Garaacdo Man United & Sababta Oo La Ogaaday
Taageerayaasha kooxda Liverpool ayaa maanta si dhaw u daawan doona kulanka xiisaha leh ee dhex mari doona kooxaha Man United iyo chelsea kuwaas oo doonaya in ay kooxda chelsea bur-buriso dhigeeda Man United. Kooxda Liverpool ayaa shalay Man United kala…
Hertha Berlin Oo Bayern Munich Ka Hor Istaagtay Rikoor Ay Ka Dhigi Lahayd Horyaalka Germany
Kooxda Hertha Berlin ayaa dhigeeda Bayern Munich ka joojisay rikoor cajiib ah oo ay dhigi lahayd kulankii ay la ciyaartay kana tirsanaa horyaalka Germany. Hertha Berlin ayaa Bayern Munich ka hor istaagtay in ay 22 dhibcood ku qabto horyaalka Bundesliga…
Rasmi: Barcelona Oo Warbixin Ka Soo Saartay Dhaawaca Daafaca Nelson Semedo & Mudada Uu Maqnaan Karo Oo La Ogaaday
Kooxda Barcelona ayaa warbixin Rasmi ah ka soo saartay dhaawaca xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda ee Nelson Semedo kaas oo uu kulankii Girona soo gaaray dhaawaca muruqa ah. Xiddiga reer Portugal ayaa dhaawac uga baxay kulankii ay Barcelona 6/1 uga…
David De Gea Oo Man United Ku War Galiyay Halka Shardi Ee Uu Kooxda Heshiiska Cusub Ugu Saxiixayo
Goolhayaha Kooxda Man United ee David De Gea ayaa kooxda Man United xaalka ku sii adkeeyay isaga oo u sheegay halka wado ee uu heshiis cusub ugu saxiixi karo kooxda hadii kale uu isaga tagi doono dhamaadka xilli ciyaareedkan. David…
Daawo: Goolashii Cajiibka Ahayd Ee Uu Lionel Messi Ka Dhaliyay Kooxda Girona, Goolal Qurux Badan Ayay Ahaayeen
Lionel Messi ayaa laba gool oo cajiib ah oo kala daran ka dhaliyay kooxda Girona kulan ka dhacay Cam Nou kana tirsanaa horyaalka La Liga. Messi ayaa goolkii 1-aad saddex xiddig dhexdood ka dhaliyay isaga oo waliba dhex jooga dilinta…
Goolhayaha Kooxda Roma ee Alisson ayaa lagu soo waramayaa in uu doortay kooxda uu doonayo in uu ku biiro dhamaadka xilli ciyaareedkan xilli lala xiriirinayo kooxda Liverpool,Real Madrid iyo PSG. Goolhayaha reer Brazil oo lagu naanayso Messi-ga Goolhayayaasha ayaa lagu…